MetaCX: Maareynta Baaskiiladaha Macaamiisha ee Wada Shaqeynta Iibinta Natiijada Ku Salaysan | Martech Zone
In ka badan toban sano ka hor, waxaan la shaqeeyay xoogaa hibo aan caadi aheyn oo ku saabsan warshadaha SaaS - oo ay ku jiraan ka shaqeynta maamule wax soo saar Scott McCorkle iyo sanado badan la-taliye is-dhexgal ah oo la shaqeynayay Dave Duke. Scott wuxuu ahaa hal-abuur hagar la'aan ah oo awood u leh inuu ka boodo caqabado kasta oo jira. Dave wuxuu ahaa maareeye akoon isbadal si joogto ah u sameeya kaas oo ka caawiyay ururada ugu waawayn aduunka si loo hubiyo in rajadooda la dhaafay.
Layaab malahan in labaduba iswaafajiyaan, baareen dhibaatooyinka kajira iibka B2B, hirgalinta, iyo macaamilka oo qiiqaya… ayna la yimaadeen xal, MetaCX. MetaCX waa madal loo dhisay si loo hubiyo iibsadayaasha iyo iibiyeyaashu inay si iskaashi leh ula shaqeeyaan si ay u diiwaangeliyaan, ula socdaan, una dhaafaan yoolalka ganacsi ee macaamiisha.
Iibsadayaasha SaaS iyo shirkadaha wax soo saarka dhijitaalka ah waxay dareemayaan kalsooni darro in ballamaha iibka la ilaalin doono. Maxaa dhacaya ka dib marka heshiiska la saxiixo?
MetaCX waxay dhisteen barxad isbeddelaysa sida alaab-qeybiyeyaasha iyo iibsaduhu u wada shaqeeyaan isla markaana u wada guuleystaan. MetaCX waxay bixisaa meel wadaag ah oo alaab-qeybiyeyaasha iyo iibsadayaashu ay ku qeexi karaan isla markaana ku cabbiri karaan natiijooyinka si wada jir ah, isu waafajinayaan iibka, guusha, iyo kooxaha gudbinta hareeraha saameynta ganacsi ee dhabta ah ee ay macaamiishu arki karaan.
Mashruuca iskaashi ee u dhexeeya iibsadayaasha iyo iibiyayaashu waxay bixiyaan:
Qorshayaasha Guusha - Hubso in lagu guuleysto natiijooyinka ganacsi ee la doonayo iyada oo la abuurayo qorshe tallaabo tallaabo ah oo loogu talagalay macaamil kasta.
habyaalada - Soo saar tusaalooyin qorshe guul oo loogu talagalay kiisaska isticmaalka gaarka ah iyo shaqsiyeed si loo fududeeyo loona cabbiro natiijooyinka ku saleysan iibka iyo guusha.
Notifications - La ogeysii marka rajada ama macaamilku ay ku biiraan buundada aad wadaagtay ama aad la macaamisho shey kasta oo buundada ah si aad ugu falceliso waqtiga dhabta ah.
Waayaha - Ku dabaaldeg daqiiqado muhiim u ah nolosha macmiilka-iskaashiyo cusub, fulinno la dhammaystiray, iyo saxiixyo cusbooneysiin ah si loo muujiyo dardar-socodka hore.
Marxaladaha Nolosha - Abuur qorshe guuleysi oo lagu jaangooyo marxalad kasta oo nolosha lagu xareynayo si loo hubiyo in adiga iyo macaamiishaadu aad la kulantaan yoolalka muddada dhow iyo muddada fog.
Waraaqaha - Sawir gacmeedka ku jira gudaha MetaCX si loo hubiyo in qof walba uu isku bog yahay kana shaqeynayo himilooyinka iyo ujeeddooyinka guud.
Bridges - Ku martiqaad macaamiisha iyo rajada meel la wadaago, isla summad leh oo aad ku diiwaangelin karto iskana kaashan kartid qorshooyinka guusha.
kooxaha - U soo qaado khibrada macmiilka nolosha oo aad bilowdo la shaqeynta daneeyayaasha ku habboon adiga oo abuuraya kooxo dad ah oo ku habboon marxalad kasta oo nolol-socod ah.
Digniinta haynta - Soo ogow khataraha haynta qarsoon adoo raadraacaya ficilo gaar ah iyo dabeecado muujinaya macaamiisha qarka u saaran inay hunguriyaan.
Natiijo kasta oo ka mid ah qorshaha guusha MetaCX waxay kuxirantahay dhacdooyinka muhiimka ah iyo cabbiraadaha adeegsada xogta si loola socdo natiijada ka soo baxda inta lagu jiro meertada nolosha macaamiisha.
Natiijooyinka ay macaamiishaadu daryeelaan waxay saameyn ku yeelan doonaan nooca xogta aad u soo jiido MetaCX. Waxaad ka soo jiidan kartaa dhacdooyinka badeecadaada ama nidaam kale oo ay ku jiraan CRM-gaaga, nidaamkaaga maaliyadeed, ama barnaamijka munaasabadda. Mar haddii nidaamyadaada ganacsi ay dhacdooyinka ku quudiyaan barta dhexdeeda xiriir, MetaCX waxay isticmaashaa shuruudaha iyo waqtiyada kama dambaysta ah ee aad cayimayso inay kuu sheegto sida ugu dhow ee macaamilku ugu dhow yahay gaaritaanka natiijada.
Ku dheji my Martech Zone Wareysiyada Podcast wadahadal soo socda oo lala yeesho Madaxweynaha MetaCX Jake Sorofman.
Diyaar ma u tahay inaad aragto MetaCX oo ficil ah? Saxiix maanta kooxdu waxay bixin doontaa demo toos ah oo ka socda barxadda.
Codso Demo MetaCX ah
Tags: kpisSuuq geynta noloshamarxaladaha noloshametacxdusha saaransaasnolosha saasmaaraynta saas lifecylceKordhinta Iibkaqorshaynta guusha
Madbacaduhu waxay u fasaxayaan Adtech inay dilaan faa'iidooyinkooda
Kameleoon: Injineer AI ah oo saadaaliya suuragalnimada beddelaadda booqdeyaasha